Somapêche sy Refrigepêche – Mahajanga: tambatambazana ny mpiasa malagasy tsy ho any ivelany | NewsMada
Somapêche sy Refrigepêche – Mahajanga: tambatambazana ny mpiasa malagasy tsy ho any ivelany
Par Taratra sur 31/10/2018
Nitsidika ny orinasa Somapêche sy ny Refrigepêche ao Mahajanga ny minisitry ny Asa sy ny lalàna sosialy, Ramaholimasy Holder, niaraka tamin’ny mpiara-miasa aminy akaiky, ny herinandro lasa teo. Nitsangana ny tapatapaky ny taona 60 ny Somapêche ; nanomboka noraisin’ny Sinoa ny taona 2009. Manana sambo 14 mifantoka amin’ny fanjonoana makamba ; mampiasa olona 400, mamelona olona 1 000 mahery. 20 eo ho eo ny Sinoa sy ny Indonezianina miasa amin’ity orinasa ity.
Olana sedrain’ny orinasa, araka ny fantatra, ny fialan’ireo Malagasy tantsambo nifindra any ivelany (Gabon, Sénégal na Maurice), nitady karama tsaratsara kokoa sy fiantohana sosialy azo antoka. Ho famenoana ny banga, nataon’ny orinasa ny mifandray amin’ireo ivontoerana sy toeram-piofanana handraisana ireo teratany sy hanomezana azy ireny karama tsara.
Momba ny Refrigepêche indray, sambo 10 ny azy ny manjono makamba ; mampiasa olona 400, ka ny 100 amin’ireo, miasa an-tanety. Araka ny tatitra natao tamin’ny minisitra, omen’ny orinasa tombony ireo mpiasa maharitra na amin’ny fotoana fikatonan’ny jono aza. Ataon’ny orinasa ny hitazonana ireo mpiasa malagasy mba tsy handeha any ivelany.
Olana lehibe iray iraisana nambaran’ireo mpitantana ny orinasa ny vokatry ny jono tafahoatra tsy manaja ny fepetra rehetra, toy ny fotoam-pikatonan’ny jono, na eo aza ny fanaraha-maso ataon’ny Vondron’ny mpandraharaha amin’ity lalam-pihariana ity. Manimba ny kalitaon’ny makamba aondrana any ivelany izany, tsy araka ny namaritan’ny Vondrona eoropeanina azy.
Nifampidinihan’ny minisitera tamin’ireo orinasa ireo ny lafiny fahasalaman’ny mpiasa, ny fidirana amin’ny Osiem sy ny SMIM ; toy izany koa momba ny Cnaps.